people Nepal » फर्सीको मुन्टा मन पर्छ ? यस्ता छन् फाईदै फाईदा ! फर्सीको मुन्टा मन पर्छ ? यस्ता छन् फाईदै फाईदा ! – people Nepal
फर्सीको मुन्टा मन पर्छ ? यस्ता छन् फाईदै फाईदा !
एजेन्सी – फर्सीको पातको साग वा फर्सीको मुन्टा खानुको फाइदाबारे सबैलाई थाहा नहुन सक्छ । त्यसैले आज हामी तपाईँलाई फर्सीको पातको साग खानुको फाइदाबारे जानकारी दिन चाहन्छौ । फर्सीको साग विभिन्न पौष्टिक तत्वले भरिएको हुन्छ । फर्सीको साग भिटामिन ई, सी, ए, बी ६, पोेटासियम, फोलिक एसिड, क्याल्सियम, कपर, प्रोटिन, म्याग्नेशियम, आइरन, फाइबर, फस्फोरस जस्ता खनिज पदार्थको राम्रो स्रोत हो । हामीलाई स्वस्थ रहनका लागि शरीरमा यि सबै तत्वको आवश्यक्ता पर्दछ ।